रवि लामिछाने पुजा-आजामा व्य ʼस्त, नयाँ टिभिको सुरूवात कहिले देखी ? (भिʼ डियो सहित) – Ap Nepal
‘न्युज २४’ले ‘सिधा कुरा जनता’सँग’ कार्यक्रम निय’मित रुपमै प्रसारण जारी’ राख्ने बताएको छ । रवि लामिछाने टेलिभिजनबाट बाहिरि’एसँगै टेलिभिजनले वैकि’ल्पक प्रस्तोता:मार्फत कार्यक्रमलाई नियमित रुपमा प्रसा’रण गर्ने भएको हो ।
तर, रवि लामिछानेले पनि केही समय’पछि परिस्कृत सोच र स्वरुप’मा पुनः कार्यक्रम लिएर आउने उद्घोष टेलिभिजनको अन्तिम कार्यक्रम’बाटै गरे’का थिए । त्यसपछि उनले सामाजिक सञ्जा’लमा दुःख पर्दा फोन गर्न सकिने र फेरि कार्य’क्रम लिएर फर्किने भन्दै फोन नम्बर’सहित पोस्ट’हरू पनि गरेका छन् ।
लामिछाने र टेलिभिज’नको दावीले गर्दा ‘न्युज २४’ र रवि लामि’छानेबीच कार्यक्र’मको स्वामित्व’लाई लिएर विवाद बढेको देखिएको छ । करि’ब पाँच वर्ष ‘न्युज २४’मा कार्यक्रम चला’एका रवि लामिछा’नेले कार्यक्र’म आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिका रुपमा दावी गरेपनि टेलिभिजनले भने ला’मिछाने कार्यक्र’मको प्रस्तोता मात्रै भएको बताएको छ ।
‘न्युज २४’ च्यानल’को सञ्चालक नेपाल ब्रोडका’स्टिङ च्यानल (एनबीसी) का एक पदाधि’कारीले हप्ताको ३ दिन नै पुरानै तालिकाअनुसार नै कार्यक्रम सञ्चा’लन नियमित हुने बताए । आइतबार, मंगलबार र बिहीबार राति ८.५०मा निय’मित प्रसारण हुने गरेको छ ।
न्युज २४ले झुक्याएर लामि’छानेले कार्यक्र’मको पेटेन्ट (कपि) राइट दर्ता गराएको भए त्यो छलकपट र बदमासी हुने टेलिभिजनले बताएको छ । त्य’सो भएमा आफूहरु कानू’नी रुपमा नै कार्य’क्रमको लागि लड्ने टेलिभि’जनका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । आफूहरुले त्यस्तो नचाहेको भन्दै उनले लामिछा’नेको कानूनी दावी रहे आ’फूहरु पनि कानूनअनुसार नै अघि ब’ढ्ने बताए ।
‘यो कार्यक्रम न्युज २४को आफ्नै भए’काले प्रस्ताताले य’समा दावी गर्न मिल्ने ठाउँ छैन,’ एक पदाधिकारी भन्छन्,’हामीले रविजीसँग गरेको सम्झौ’तामा उहाँको ‘जब डिस्क्रि’प्सन’ स्पष्ट छ, त्यसमा कार्यक्रमको सर्वाधिकार २४मै निहीत उल्लेख छ ।’
कार्यक्र’मको ‘क्रेडिट टाइटल’मा पनि कार्यक्र’मको सर्वाधिकार कम्पनीको हुने उल्लेख रहेको कम्पनीको दावी छ । कार्यक्रमको कपि’राइटबारे लामिछानेले सार्व’जनिक रू’पमा केही बताएका छैनन् । यसबारे बुझ्न खोज्दा लामिछानेको फोन उठेन ।
उनले अन्तिम एपिसो’डमा लाइभ गर्न नपाउँदा दुःख लागेको समाजि’क सञ्जालमा लेखेका थिए । ‘५ वर्ष काम गरेको संस्था छोड्नु पर्दा दुःख लाग्यो, अन्तिम कार्यक्र’मको अन्तिम र मुख्य रिपोर्ट नै काटिएकोमा झन दुःख लाग्यो,’ उनले लेखेका थिए । उनले आफ्नो टिमले तयार पारेको तर, प्रसार’ण नभएको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरेका थिए । यो सामग्री अनलाइन खबर बाट लिएका हौ ।
४५ मिनेटकाे कार्यक्रम मात्र हाेईन नयाँ टेलिभिजन जनताका चासाे ,गुनासाे र प्रश्नमा सर्मपित
सीधाकुरा जनतासँग कार्यक्रमका प्रोड्युसर दीपक बोहोराले नयाँ टेलिभिजन सम्पूर्ण रुपमा जनताको चासो गुनासो मा आधारित रहने बताएका छन् । आफ्नो आधिकारिक फेसबुक मार्फत उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनी लेख्छन् :
न्युज२४ टिभि रवि दाईले मात्र हाेईन म लगायत हाम्राे सिधा कुरा टिम सबैले छाेडेका हाैँ । ४५ मिनेटकाे कार्यक्रम मात्र हाेईन नयाँ टेलिभिजन जनताका चासाे ,गुनासाे र प्रश्नमा सर्मपित हुनेछ । टेलिभिजन प्रसारण हुन वैशाख लाग्ला तर गुनासाे सुन्ने र भेटघाट गर्ने काम सुरु भईसकेकाे छ । यसबीचमा हामीलाई 98-51322111 र 98-01038181 मा सम्पर्क गरि वा म्यासेज पठाई आफ्नो गुनासो टिपाउनु होला।
यहाँ तल थि’चेर भिडि’यो हेर्नुहोस…
Prevआजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल माघ १५ गते बिहिबार इश्वी सन २०२१ जनवरी २८ तारीख
Nextअर्जुन बिक प’क्राउ परेपछि घरमा पहिलो पटक मिडिया ,भाइरल बनेर के पाए अर्जुनले ? -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
हेर्नुहोस् सिन्दु’र पोते र रातो सा डीमा झनै सुन्दरी देखि’इन् नायिका श्वेता खड्का (भिडियो सहित)
दिवेशले अमेरिकन आइडलमा फेरि दिए कमालको प्रस्तुती जज सबैले गरे तारिफ -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)